Semalt: WordPress Plugins - Firy no tokony hampiasainao?
WordPress dia manerantany mponina maneran-tany mikasika ny fampiharana azy. Iray amin'ireo CMS tsara indrindra izy io. Bilaogera maro sy eCommerce startups mandinika ny WordPress noho ny fahamendrehany amin'ny zavatra atolony. Ankoatra izany, ny tranonkala WordPress dia misy karazana lohahevitra sy fanentanana mifanaraka amin'ny filàn'ny besinimaro. Ny tsikombakomba tsotra dia ny fampiasana plugins. Plugins dia singa amin'ny loha-hevitra WordPress izay afaka manampy tombony amin'ny fomba ambaran'ny tranonkalanao.
Fanampiana plugins manampy amin'ny fomba maro, indrindra rehefa mila asa mahazatra ianao. Tokony hojerena fa ny ankamaroan'ny WordPress plugins dia tonga amin'ny ampahany amin'ny sehatra. Mety ho very ny fanovana rehefa manova na manova ny foto-kevitrao. Na izany aza, misy tranonkala manokana WordPress plugins dia afaka mitazona sasantsasany amin'ny sombin-dahatsoratra eo amin'ireo tranga ireo. Alexander Peresunko, manam-pahaizana matihanina Semalt , dia manondro fa ny fampiasana plugins dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny loha-hevitrao.
Firy ny Plugins WordPress dia 'be loatra'?
Araka ny hita etsy ambony, plugins dia sifotra code code PHP izay manampy ny fonosana amin'ny site WordPress misy anao. Na izany aza, rehefa manohy manamboatra ny tranokalanao ianao, dia mety manomboka mihena ny ora fiasan'ny rafitra. Sarotra be loatra ny vohikala mivezivezy, miantraika amin'ny fiheveran-dry zareo fikarohana . Tahaka ny hita etsy ambony, ny sombintsombiny dia miasa toy ny mampiditra fehezan-dalàna amin'ny tranonkala ankapobeny. Amin'izao lafiny izao, amin'ny fampitomboana code ny fampiroboroboana dia mitombo ny fahamatorana..Google dia mampiasa ny fahatsapan'ny vohikala ho toy ny singa fototra ao amin'ny SERPs.
Amin'ny ohatra iray azo ampiasaina, raha mampiasa kajy maherin'ny 30 ianao dia mety tsy hanova ny valin'ny tranonkalanao. Amin'ny toe-javatra hafa, ny fandefasana baiko loatra ao amin'ny tranokalanao dia mamaritra ny fotoana anehoanao valiny. Ny plugin miaraka amin'ny sombintsombiny maro dia mety manana fiantraikany mitovy amin'ny tranonkala mampiasa plugins maro. Tahaka ny codecode amin'ny vohikala, mila mieritreritra momba ilay kaody izay misy tranonkala iray.
Inona no plugins tsara indrindra ampiasaina?
Miankina aminao ny fanapahan-kevitra hampiasa WordPress plugin. Azonao atao ny manatanteraka vokatra miavaka. Amin'ity tranga ity, dia mety ilaina ny manao ny PHP plugin. Ao amin'ny lahatsoratra teo aloha, misy fomba maro hanamboarana plugins tsotra. Mila mila fahalalana ara-teknika amin'ny rafitry ny rakitra WordPress ianao. Azonao atao koa ny afaka manova rakitra PHP amin'ny alalan'ny taratasy tsotra iray.
Ny plugins dia tsy mila safidy. Na izany aza, misy plugins tena ilaina izay afaka manatsara kokoa ny tranokalanao. Ny sasany amin'ireo tsy maintsy manana WordPress plugins dia ahitana:
WordPress SEO avy amin'i Yoast:
Ho an'ireo olona te-hanatsara ny tranokalany ho an'ny fahitana ny mozika fikarohana, ity plugin ity dia ahitana ny lafiny manan-danja amin'ny SEO. Avy amin'ny fikarohana lalindalina momba ny fanamafisana ny famaritana meta, misy tranga maro izay ahafahan'ny olona manao plugins useful
Ity dia plugin iray manontolo izay manampy olona iray handrindra ny lafiny manan-danja amin'ny rakitrao. Azonao atao, ohatra, ny manampy na manatsara ny daty. Azonao atao koa ny mamerina ny tranonkalanao hanodina indray ny fanovana raha misy zavatra tsy mandeha.
Ity plugin ity dia afaka manampy ny tranokalanao hampivelatra fifamoivoizana. Manampy ny mitazona mpisera iray izay nitsidika azy tamin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo dokambarotra fanampiny ao amin'ny tranokalanao Source .